China Electric Hydraulic Excavator CED490-8 ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
1. Ejiri igwe eletriki eletrik nke ụdị ndị China a ma ama, a pụkwara ịhọrọ ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ na nkọwapụta ọkụ ọkụ mpaghara.N'ihi ọkụ eletrik, ma e jiri ya tụnyere mmanụ dizel, CED490-8 na-emeri adịghị ike nke obere okpomọkụ na-amalite isi ike na enweghị ike zuru oke na ebe dị elu.Site na nhazi dị ala na nchedo radieshon, ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị mma na gburugburu ebe siri ike dị ka ala ala na okpomọkụ dị ala.N'ihi na ọ dịghị iyuzucha gas ikuku, moto mbanye ana achi achi ala mkpọtụ mmetọ, nke kasị mma nhọrọ maka ichekwa eke gburugburu ebe obibi.
2. CED490-8 kwadebere na akụrụngwa hydraulic a ma ama na akụkụ ya.Ndị na-egwupụta ihe na-egwupụta ihe nke BONNY na-eji nfuli isi ụdị plunger agbanwe agbanwe nwere njikwa ike eletrọnịkị, nke nwere ọtụtụ ọrụ dị ka njikwa ike eletrọnịkị, mmalite mbugharị efu, mgbaba kacha nta na-anọpụ iche na ngbanwe nrụgide.
3. CED490-8 na-anabata usoro igbu egbu nke hydraulic Japanese Kawasaki, na-amalite igbu egbu, breeki buffering, mmalite na ngbanwe nrụgide nrụgide, mgbe ọ na-eju afọ ngwa ngwa mgbe ọ na-eme ka nkwụsi ike nke ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ, ọ bụ nkwa dị ike maka ịrụ ọrụ dị elu.
4. BONNY mining hydraulic excavator adopts the automatic centralized lubrication system of the international famous brand, and adopts the adjustable control system to-akpaghị aka mmanu nkwonkwo nke dum igwe na oge na quantitative etiti oge, ibelata ike nke mmezi ọrụ na mbenata mmezi oge.
5. BONNY CED490-8 na-arụ ọrụ ngwaọrụ na-eji ngwá ọrụ arụ ọrụ ọhụrụ emebere iji kwalite nhazi nke ebe ọ bụla hinge, jikọtara ya na cylinder hydraulic kacha mma na China, iji mee ka arụmọrụ na ntụkwasị obi dịkwuo elu.
CED490-8 bụ nnukwu olulu mmiri dị nha 50.A na-enye ya ọkụ eletrik na moto na-anya ya.Ngwa abụọ na-arụ ọrụ nke backhoe na shọvel n'ihu bụ nhọrọ.Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na-ewu, Ngwuputa Ngwuputa, iwu nchekwa mmiri na njem.Ọ dị irè, dị mfe iji rụọ ọrụ na idobe ya.
Nke gara aga: Igwe ọkụ eletrik eletrik CED460-8
Osote: Igwe ọkụ eletrik eletrik CED760-8